पेट्रोल नपाएको झोकमा पम्पका म्यानेजर र क्यासियरको कोठाको गोमन सर्प छाडेपछि... - गोकर्णेश्वर खबर
पेट्रोल नपाएको झोकमा पम्पका म्यानेजर र क्यासियरको कोठाको गोमन सर्प छाडेपछि…
गोकर्णेश्वर खबर१७ श्रावण २०७७, शनिबार १३:२२ मा प्रकाशित (८ महिना अघि) ५५२ पाठक संख्या
एजेन्सी – कोहि मानिसले कुनै पनि सामग्री बेच्न इन्कार गर्यो भने के गर्नुहुन्छ ? केहि रिस त उठ्ला तर उसलाई हानी पुर्याउनुको सट्टा अर्को पसलबाट सामान किन्न गइएला । तर के कोहि मानिसले सामान बेच्न इन्कार गर्यो भने उसको कोठामा सर्प छाडेर कोहि भाग्ला ? लकडाउनका बीचमा यस्तै एक अनौठो घटना भएको छ, भारतमा ।
भारतको महाराष्ट्र प्रदेशको बुलढाणामा यस्तै अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । बुलढाणाको एक पेट्रोल पम्पमा बोतलमा पेट्रोल लिन आएका दुइ युवकले पम्पका म्यानेजर र क्यासियरको कोठामा सर्प छाडेर भागेका छन् । सर्पलाई कोठामा देखनासाथ पेट्रोलपम्प भागदौड मच्चिएको थियो । पछि स्थानिय सपेरालाई बोलाएर सर्प नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
बुलढाणा मलकापुर सकडमा रहेको चौधरी पेट्रोल पम्पमा गत मंगलवार साझँ दुई युवक बोतलमा पेट्रोल लिन आए । तर भारत सरकारले तोकेको समयपछि पेट्रोल लिन आएको भन्दै पेट्रोल अस्विकार गरे ।
तब ती युवाले पेट्रोल नपाएको झोकमा पम्पका म्यानेजर र क्यासियरको कोठाको गोमन सर्प छाडेर भागे । सर्प छाडेर भागेको भिडियो पम्प सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको छ ।
सर्प छाडेर भाग्ने दुबै युवा सपेरा भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार रिसको झोँकमा उनीहरुले आफुसित रहेको सर्प छाडेर भागेका थिए । पेट्रोल पम्प मालिक सारिका कैलास चौधरीले युवाविरुद्ध कारबाहिको माग गरेका छन् ।
एक पुरुष तीन-तीन पटक सुत्केरी
म्यानमारमा सैनिक कू हुँदा थाहै नपाई नाचिरहेकी युवतीको भिडिओ भाइरल
जहाँका महिला जीवनभर मात्र एकपटक बिहेको समयमा नुहाउँछन् !
यी पुरुष जसले हरेक वर्ष नयाँ श्रीमती भित्र्याउँछन्
यस्तो ठाउँ जहाँ कोही बच्चा प्रधानमन्त्री छन् त कोही राष्ट्रपति !
यो हो संसारकै महंगो ब्याग : मूल्य ८४ करोड रुपैयाँ !